Qalabka Istuudiyow Raadiyaha, Gudbiyaha Raadiyaha iyo Qaadaha
La isku halleyn karo oo Caalamka oo dhan ah? Had iyo jeer waxaan samaynaa waxa ugu fiican!
Waxaan sharad kuwan yihiin waxa aad raadinayso
Wadaag Xiiso Leh: Jumlo-iibsi iyo macne tafaariiqeed WAX WALBA baahinta.
Si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee isticmaalaha ugu dambeeya, waxaan awoodnaa inaan soo saarno qalabka baahinta raadiyaha ilaa toban kun oo qaybood oo buuxa, iyo xitaa qaybo badan oo ku saleysan tirooyinka la dalbaday, tafaariiqda qaybo yar ayaa sidoo kale la heli karaa. Jid ahaan, waxaan ku hawlanaa ganacsiyada Amazon iyo Arbacada ah oo si weyn uga shaqeynaya ballaarinta ganacsiga. Ilaa hadda, iibsadayaashayada caalamiga ah waxaa laga faa'iideystey malaayiin agab iib ah oo qaali ah, dhammaan abuurista FMUSER Iyada oo leh waayo-aragnimada wax-soo-saarka ee hormuudka ka ah iyo shabakad iibka caalamiga ah oo horumarsan, FMUSER waxay wali ku jirtaa rabitaankeeda si ay u abuurto silsilad sahayda oo ay ka muuqato qiimaha miisaaniyada iibsashada, waxqabadka sare ee badeecadaha, iyo qaybaha kala duwan ee qaybta. Wax badan baro>>
Nala soo xidhiidh haddii aad u baahan tahay kuwa ku jira liiska soo socda:
1. Qalabka Idaacadda FM-ta ee Iibka ah - Eeg Liiska oo dhan Halkan
Xidhmooyinka Saldhigga Raadiyaha oo Dhameystiran - Xidhmo dhammaystiran oo nidaamyada anteenada FM ah oo leh qalabyo
Xidhmada Gudbiyaha FM-ka (Alaabooyinka ay ku jiraan) - Xidhmo buuxa oo loogu talagalay istuudiyaha raadiyaha FM - laga bilaabo soo-saareyaasha maqalka ilaa miiska istuudiyaha, qalabka isku xirka gudbinta istuudiyaha ee idaacada FM, waxaa ku jira anteenada STL, gudbiyaha STL, iyo qaataha STL oo ay la socdaan qalabyada.
Wariyeyaasha Idaacada FM-ka ah - Laga soo bilaabo heerka kilowatts-ka awood sare oo ah gudbiye FM ah oo adag (AKA: gudbiyaha FM-ka) ilaa rack-Mount FM-ka gudbiyeyaasha heerka koronto.
Anteenooyinka Baahinta FM-ka - Laga soo bilaabo anteenada wareegta ah, anteenada diyaaradda dhulka, anteenada FM dipole, anteenada FM ee raadiyaha baabuurka, anteenada FM-ta badan ee gudbiyaha FM ee awooda sare leh (3 bays, 4 bays, 6 bays, iyo 8 bays waa ikhtiyaari).
2. Qalabka Idaacadda TV-ga ee Iibka
Gudbiyeyaasha TV-ga UHF&VHF iyo anteenooyinkooda
Xidhmada dhamaystiran ee xarunta raadiyaha TV-ga iyo istuudiyaha TV-ga.
3. Qalabka Qolka Injineerinka Raadiyaha ee Iibka
Shaandhaynta RF, culayska dummy RF, awood sare RF isku dhafka ah, xadhkaha gudbinta adag, fuuqbaxa waveguide antenna, iwm.
Riix halkan si aad u aragto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan "Injineerinka Raadiyaha - Liiska Qalabka Saldhigga oo Buuxa".
4. Xalka Warbaahineed ee la Habeeyay - Eeg liiska buuxa Halkan
Dhameystiran xirmooyinka Saldhigga Raadiyaha ee Kaniisadda Wadista iyo Tiyaatarka-ka-wadidda - Xirmooyinka buuxa oo ay ku jiraan gudbiyaasha FM, anteenooyinka FM, iyo qalabyada loogu talagalay baahinta raadiyaha FM-ka ee aan lala xiriirin ee hoos yimaada masiibada (heerka awoodda gudbiyaasha baahinta waa ikhtiyaari qiimahana waa kala duwan yahay).
Dhammaan-in-hal Raadiyaha Turnkey Solutions - Baakadaha qalabka baahinta ee diyaarka ah oo wata wax kasta oo looga baahan yahay idaacada FM-ka ee gaarka ah ama ganacsiga iyo rugta baahinta TV-ga khabiirka ah.
Xalka Miisaaniyadda - Xalka si gaar ah loogu talagalay iibsadayaasha gaarka ah ee u baahan qaybo ka mid ah xirmada qalabka idaacada.
5. Xalka Live Streaming - Eeg liiska buuxa Halkan
IPTV Qalabka Socodka Hardware - Qalabka qalabka IPTV oo leh 1, 4, iyo 16 kanaal, IPTV hardware transcoder, iyo decoder
Qalab Dheeraad ah oo loogu talagalay Streaming - Modulator, kamarad, makarafoon, sameecado, iwm.
Shabakadda Iibka Caalamiga ah ee Qalabka Warbaahinta Raadiyaha
Sida a soo saaraha khabiir ee garoonka baahinta raadiyaha, waxaan gabi ahaanba dabooli karnaa baahidaada baahinta qiimo ahaan, tayo iyo tiro ahaanba. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay ee waayo-aragnimada wax soo saarka ee qalabka baahinta, waxaan si guul leh ugu adeegnay in ka badan toban kun oo baahiyo baahinta raadiyaha ah oo ka kala yimid meeraha adduunka oo dhan, waxaana mahad iska leh warshadahayada xirfadda leh (Haa waxaan ku leenahay kuwa aan ku leenahay Shiinaha!), Aad ayaan ugu tartameynaa shuruudaha iibsashada qiimaha iyo tayada qalabka, taas oo gacan ka geysaneysa dhisidda kalsooni xooggan macaamiisheena ka kala socda wadamada 200 ee ku hawlan ganacsiga baahinta raadiyaha.
Si fudud, haddii aad raadinayso mid xirmooyinka idaacada oo dhameystiran or qalabka baahinta raadiyaha oo iib ah, hubi inaad la xidhiidh FMUSER Broadcast; Haddii aad u qodayso qalabka baahinta ganacsiga jumlada (tusaale: gudbiyeyaasha baahinta, isku-darka RF, iwm), fadlan xor u noqo inaad Na soo wac, Had iyo jeer waanu dhegaysanaynaa!
Ma waxaad ka timid mid ka mid ah wadamadan iskaashiga ah? Aan Wada Shaqeyno!
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua iyo Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, The Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia iyo Herzegovina, Botswana , Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Republic of the Costa Rica , Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Qubrus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor (Timor-Leste), Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel , Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea, North, Korea, South, Kosovo, Kuwait,Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lubnaan, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Dawlada Dhexe ee Moldova, Monaco , Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts iyo Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent iyo Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome iyo Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sudan, South, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad iyo Tobago , Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab E mirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Waxaan rajaynaynaa in qalabka idaacadayadu ay ka faa'iidaysan doonaan shaqaale kasta oo baahinta ama kooxaha ganacsiga ee ka jira warshadaha, taas oo keeni karta wada shaqayn lama filaan ah ama kor u qaadida wacyigelinta sumadda, iyo dabcan, faa'iido wadaag ah mid kasta oo ka mid ah saaxiibadayada iskaashiga ah.
Markaa, haddii aad xiisaynayso inaad noqoto wakiilladayada caalamiga ah ee gobolka, ama ka qaybqaadashada xidhiidh ganacsi oo adag oo wakhti dheer ah Baahinta FMUSER, aynu Wadahadal ganacsi haatan!
Waxaan la joognaa Idaacadda FMUSER!
Si aan u gaarno aragti aragtiyeed oo ku saabsan suuqgeynta baahinta raadiyaha caalamiga ah, waxaan had iyo jeer aad u xiisaynaa in aan soo bandhigno wax soo saarkeena annagoo kaashanayna saaxiibo wada shaqeyn kara oo ka kala yimid daafaha caalamka, sidaas darteed, waxaan mar walba ka qeyb qaadan jirnay qaar ka mid ah bandhigyada elektaroonigga ah ee baahinta caalamka u furan. , tusaale ahaan, Canton Fair, HKEF, CCBN, iwm. Sawirradan soo socda ayaa laga soo qaaday goobtayada inta lagu guda jiro bandhigga Hong Kong Electronics Fair 2012 (Autumn Edition).
Waxaan ku faannay in FM-tayada baahinta FM-ta lagu soo bandhigay HKEF 2012.
"Markii ugu horeysay ee alaabtayada baahinta? Ha werwerin, Mudane, waxay qaadataa dhowr daqiiqo oo keliya..."
Qalabka idaacada FM ee FMUSER ayaa lagu muujiyay goobta bannaanka ah.
"Kaliya maaha gudbiye FM ah, waa gudbiye FM oo ka socda Idaacada FMUSER!"
Habka ugu wanaagsan ee lagu wanaajin karo ka warqabka summada ayaa ah soo-gaadhsiin badan, waana ku faraxsanahay inaan samaynay
Halka aan ku leenahay bandhigayadii ugu horreeyay ee Asia World-Expo - HKEF 2012